JetBrains na-ebupụta Space, Platform Mmekọrịta maka Ndị Mmepe na Ndị Mmebe | Site na Linux
JetBrains (ụlọ ọrụ na-arụpụta sọftụwia emere maka njikwa ọrụ yana gburugburu mmepe gburugburu maka asụsụ mmemme dị iche iche) na nso nso a ka ekpughere oghere ọha na eze nke Space, usoro ntinye aka na mmekorita nke ndi otu okike.
Space Ebumnuche ịbụ ebe ụkwụ maka otu nke nwere ike ịgụnye ndị mmepe, ire ahịa, imewe, ọrụ mmadụ, ndị ọrụ iwu na ndị ọzọ ndị na-arụ ụdị ọrụ ọ bụla chọrọ multimedia na nkwukọrịta ọtụtụ ọwa, nzukọ usoro ihe omume na njikwa ọrụ.
Ihe mgbaru ọsọ nke oghere ụwa bụ ikpokọta ngwa ọrụ niile na-arụkọ ọrụ ọnụdị ka nkata, otu na njikwa ọrụ, nzukọ na ịhazi usoro, na akwụkwọ, ha niile n'otu ebe. N'ihi ya, ngwanrọ niile ma ọ bụ usoro mmepe okike na-anọchi anya na otu ngwa, ọ dịghịkwa mkpa "ịgbanwe ọnọdụ" (ma ọ bụ gbanwee n'etiti ngwa mgbe ị ga-efunahụ ya).
"Na Space, ọ dịghị mkpa ka ịgbanwee ngwaọrụ dị ka ihe niile dị n'otu ebe, nke na-enyere anyị aka inweta nkọwa dị mma nke ụlọ ọrụ ahụ dum," ka Andras Kindler, onye nchoputa Makery, na-eweta ọrụ.na ngwaahịa dijitalụ kwuru. “Anyị na-eji ndepụta ndenye ego, nsogbu, nyocha nyocha koodu, akwụkwọ blọgụ, na ndị ọzọ. Oghere na-enye anyị ohere idebe usoro niile na egwu «.
N'ụzọ dị otú a, Oghere na-enyere aka ịmepụta echiche zuru oke maka onye ọ bụla na otu, ikwe ka ngwa ahụ gbanwee ka ọ dabaa ọrụ nke onye ji ya.
"Tupu Space, ndị mmepe anyị na-echekarị na ha nọpụrụ na ndị ọzọ yana anaghị arụ ọrụ dị omimi na ọrụ," Anna Vinogradova, onye isi ahịa ahịa na AmberCore Software Ltd., kwuru, bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na mmepe ngwaahịa teknụzụ. "Anyị anọwo na-achọ ngwá ọrụ nke na-eme ka ihe niile banye n'otu otu ma mee ka ọ dịkwuo mfe maka ndị otu iji kwurịta ọrụ ha na ibe ha karịa ịnọdụ iche na ebe nchekwa ha."
N'ọdịnihu, Space ga-agbakwunye atụmatụ ndị na-enye ya ohere ịmekọrịta na Kalịnda Google na Outlook, yana ijikọta na ngwaọrụ ndị ọzọ a ma ama.
Ngwa ahụ O nwekwara interface mmemme mmemme HTTP, webhooks, ihe ngwanrọ Space Client software development, ubi omenala na akụrụngwa. N'oge na-adịghị anya, ọ ga-enye ngwa nkeonwe na ngwa ahịa, yana atụmatụ ndị ọzọ na-eche ihu ọha.
"JetBrains malitere dị ka ụlọ ọrụ na-emepụta ihe, mana ugbu a, 40% nke ndị otu anyị na-arụ ọrụ okike dị iche iche: ndị na-emepụta ihe, ndị na-ere ahịa, ndị ode akwụkwọ na ndị ọzọ," JetBrains CEO Maxim Shafirov kwuru "Anyị kere Space ka anyị wee nwee ike ịga n'ihu na-arụkọ ọrụ ọnụ dịka otu ma anyị kwenyere na ụlọ ọrụ ndị ọzọ ga-eritekwa uru."
N'ime atụmatụ ndị si na Space pụta, anyị nwere ike ịchọta ndị na-esonụ:
Http API: webhooks na onye ahịa SDK maka ijikọ na ngwaọrụ ndị ọzọ.
PMgbanwe mgbanwe na akpaaka: in-ngwaahịa na ubi omenala na Kotlin workflows iji dabaa kpọmkwem nhazi na usoro.
Mkparịta ụka mmekọrịta na iwu: Ngwa nwere ike ịdebanye aha bots nke ga-arụ ọrụ dị ka ndị ibe na nkata ma nwee ike ịmekọrịta. Zọ ọzọ iji gwa ngwa okwu bụ iwu.
Oghere dị ka ihe nkesa ikike: OAuth2, usoro iwu ụlọ ọrụ ikike iji rụọ ọrụ iji nye ohere ohere maka ngwa mpụga, njikọta na ọrụ.
Ohere ahịa SDK: A na-enye onye ọrụ ohere oghere SDK onye ọrụ gọọmentị maka Kotlin na .NET iji mee ka mmekọrịta dị nso na Space na ọkwa ọkwa ọkwa.
Ngwa: Zọ bụ isi iji gbasaa Space. Zụlite ngwa ndị na-arụ ọrụ dị iche iche oghere modulu ma rụọ ọrụ dị iche iche.
Oghere na-amalite site na ọkwa n'efu maka ụlọ ọrụ iji nwalee ngwanrọ ahụ na nhọrọ ndenye aha na-amalite na $ 8 kwa onye ọrụ na-arụ ọrụ kwa ọnwa maka ọrụ otu otu. Ikpo okwu dị na igwe ojii ma nwee ụdị nke mpaghara n'ọdịnihu dị nso.
N'ikpeazụ, ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike lelee njikọ ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Mmemme » JetBrains weputara oghere, ihe mmekorita nke ndi mmepe na ndi mmebe
Libtù Libra gbanwere aha ya wee bụrụ Diem Association